Famokarana vokatra, mpamatsy - Mpanamboatra vokatra any Sina
EN877 SML Hubless Cast Iron Pipa
Fametrahana vy vita amin'ny vy
Fonony manhole sy Frame
Ny fantsona sy fantsom-by vita amin'ny SML no-hub dia mifanaraka amin'ny fenitry ny BSEN877, DIN19522, ISO6594. Ny akora dia azo averina sy azo averina 100%, miaraka amin'ny fifindran'ny feo malefaka, porofon'ny afo, porofon'ny fipoahana ary manohitra ny fanitsiana. Izy ireo dia ampiasaina amin'ny famaritahana ny rano amin'ny tranobe, ny fanariana, ny fako sy ny fitsofohana. Ny systerm sy ny orana koa napetraka ivelan'ny trano sy ny rafi-pandevenana ambanin'ny tany.
Ny EN877pipe ivelan'ny coating dia mena, epoxy miaraka amin'ny hateviny tsy latsaky ny 70um. Ny palitao anatiny dia volontany epoxy mavo miaraka amin'ny halalin'ny 120um. Na ao anatiny sy ivelany dia mihoatra ny 120μm vovoka epoxy coating miaraka amin'ny loko mena.
Ny fittings dia mena ihany koa ao anatiny sy ivelany, mihoatra ny 70um ny resin-epôxy c vai, ary mihoatra ny 120um ny vovony.
Ny fantsona sy ny fantsom-tany vita amin'ny vy any Hubless dia ampiasaina amin'ny fampiharana fantsom-bolan'ny gravity. Ireo fantsona sy fantsona ity dia natao ho an'ny fampiharana tsy fanerena, satria ny fisafidianana ny habeny mety amin'ny rafi-pitondran-tena, ny fako, ny fako ary ny rivo-drivotra. Ny fantsona dia fantsom-boankazo, rafitry ny andiany, tsy misy porh pinhole ary mamono, malefaka ary malefaka ny rindrina.
Couplings baja vita amin'ny vy tsy misy vy
Tsy misy fantsom-pivoriana dia namboarina mba hampifangaroana fantsona vy sy fantsom-barotra No-hub, fantsona vy ary fantsona plastika na fantsona varahina.Ny fangaro dia misy gazy goavam-be vita amin'ny elastomera mahery vaika izay napetraka ao anaty ampinga tsy miangaly.
Ny fantsom-by vy ductile dia amboarina araka ny fenitra iraisam-pirenena ISO2531 / EN545 / EN598 / NBR7675. Ny vy vy vita amin'ny vy dia ny vy vy, karbonina ary silikon. Mandritra ny fizotran'ny famokarana dia mizaha fitsapana mafy andalana isika ary misy ny fitsapana dia: tsindry hidraulika, simenitra ny tsipika simenitra, ny hamafin'ny zinc, ny hatevin'ny bitumen, ny fitsirihana, ny fitsapana manaitra ary ny sisa. Indrindra indrindra, manana detector X-ray manandratra indrindra isika mba hizaha toetra ny rindrina tsirairay amin'ny fantsona mba ahafahantsika manome antoka tsara ny fantsona mifanaraka amin'ny fenitra.
Fametahana takelaka: Famoronana Epoxy resin-doko & Coating Powder, coety bitumen.
Manhole Covers dia namboarina ho an'ny fananganana sy ny fampiasana ampahibemaso. Ny manhole izay misy rindrina sy sarony ary / na tsofy. Ny fonon'ny manhole dia afaka miaro tsara ny fiarovana ny mpandeha an-tongotra sy ny fiara, ary afaka manakana tsara ny orana sy ny ranony hafa tsy hiditra. Manhole Covers dia ho malama sy tsy afaka amin'ny lavaka fasika, mitsoka, mitsoka na misy kilema hafa.
Coating: Black bitumen Ny fahazoan-dàlana mainty tsirairay dia voafetra eo amin'ny 3mm mihoatra ny 3mm
Kilasy: AA1900KN, AA2 600KN, A1 400KN, A2 230KN, B 125KN, C30KN
1. Afaka mandray serivisy OEM isika.
2. Fitaovana: vy vita amin'ny karbonina, vy vita amin'ny vy, Stainless vy, vy vy manohitra, vy vy, sns.
3. Famokarana: fametrahana fampiasam-bola.
4. Teknolojia fitsaboana any ivelany: fametahana chrome, fantsona zinc, varahina varahina, varahina nickel, anôdiôdiôdiôma nomen'ny alika aluminium, phosphating, bluing, blackening, passivation, carburizing, nitriding, ny famonon-tany ary ny faritra hafa amin'ny fitsaboana fitsaboana.
5. Famolavolana: Araka ny volan'ny mpanjifa, hevitra ary santionany
6. Ny famelan-keloka sy ny mombamomba azy dia mifanaraka amin'ny GB, ASTM, BS, SAE, AISI, ACI, DIN, EN, JIS, ISO ary ireo zavatra voafaritra manokana.
Azontsika atao ny manome ny karazan-dàlana tsy misy habe mety mahafeno ny fenitra EN877 DIN19522, ary koa ny fametrahana haingo manokana maro azo omena.
Ny akora dia azo averina sy azo averina 100%, miaraka amin'ny fifindran'ny feo malefaka, porofon'ny afo, porofon'ny fipoahana ary manohitra ny fanitsiana. Izy ireo dia ampiasaina amin'ny famaritahana ny rano amin'ny tranobe, ny fanariana, ny fako sy ny fitsofohana. Ny rafitra ranonorana koa napetraka ivelan'ny tranobe sy ny rafi-pandevenana ambanin'ny tany. Ny fantsona dia napetraka ao amin'ny trano fonenana sy trano, hotely, hopitaly ary toeram-pivarotana lehibe.
Ny vy vy manamboatra ny fofona anatiny sy ivelany dia ny paty epoxy mena misy halehiben'ny farafahakeliny 70um, farafahakeliny epoxy miaraka amin'ny savaivony farafahakeliny 120um misy loko mena.
Ny vy akora dia mifanaraka amin'ny ISO185, fantsom-peo mety hampiasaina mekanika mampiavaka ny tanjaky ny tavy min 150Mpa. Ny hamafin'ny halehiben'i Brinell HB260.
Ny arina ivelany sy anatiny dia tsara indrindra. Ny fanoherana coating anatiny amin'ny famafazana ny sira: farafaharatsiny 350h, mahazatra 700 ora. fanoherana ny rano mandava; farafahakeliny 30 andro amin'ny 23 degre centigrade.chemical fanoherana ny PH2 ka PH12 farafahakeliny 30 andro amin'ny 23 degre centigrade. fanoherana ny bisikileta amin'ny maripana: 1500 ny tsingerina eo anelanelan'ny 15-93 degre sentigrade.
EN877 BML Hubless Cast Iron Pipa
Ny fantsona fantsona BML dia ho an'ny rafitry ny tatatra tetezana.
Fametahana ivelany: Ny fantsona BML dia manisy sosona zink farafahakeliny farafahakeliny 40um (290g / ㎡), hamakivaky volon-doko volafotsy volafotsy volafotsy volafotsy farafahakeliny 80um.
Ny coating ao anaty dia mitovy amin'ny epinxy resin 120um mitovy amin'ny fantson'ny SML.
EN877 KML Hubless Cast Iron Pipa
Ny fantsona sy ny fantson-drano KML dia ampiasaina amin'ny rano fako misy lakozia misy lakozia matihanina sy fitaovana mitovy.
Fametahana ivelany: Manaova coating coing coating misy halavan'ny min 130g / ㎡, ary ambonin'izany ny fonon'ny epoxy ambany indrindra amin'ny 70um.
Ny palitao anatiny dia epoxy.A sosona roa sosona epinoma misy otrikaina misy habaka 240um.
Ny kofan'ny KML dia mifangaro ao anatiny sy ivelany miaraka amin'ny epoxy misy vovony avo lenta amin'ny 120um farafahakeliny.
EN877 TML Hubless Cast Iron Pipa
Ny fantsona fandefasana TML dia miorina amin'ny EN 877, fa ny fampiasana fantson'ny SML amin'ny fametrahana ambanin'ny tany.
Fametahana ivelany: Ny fantsona TML dia manisy sosona zinc misy famonosana ny 130g / ㎡, noho ny misy palitao volontany na mena.
Coating ao anatiny: Ny palitao dia loko orche, epoxy 120um.
Fitaovana: co-coating coating mena, 120um farafaharatsiny.
BS4622 437 416 Zavamaniry vy maintso
Grey Iron Socket sy Spigot Pressure Pipa dia niasa ela teo amin'ny sehatry ny fananganana ho rafi-pitaterana azo antoka sy lafo. Izy ireo dia mifanaraka amin'ny fenitry ny BS4622, BS437 ary BS416. Ny fantsom-by vy dia vokarina amin'ny fandatsahana sentrifugal amin'ny bobongolo metaly, ny coating dia ho bitumen na mena epinoma mainty.
BS4622 Sinle Spigot fantsom-by fantsom-by fantsom-bolo miaraka amin'ny tadina vita amin'ny vy vita amin'ny vy, DN100-DN700, Length: 1830mm, 4110mm ary 5120mm
BS437 Sinle Spigot manipy fantsom-by fantsona vy miaraka amin'ny tadina vita amin'ny vy vita amin'ny vy. DN75-DN225 halavan'ny 1830mm + -5mm
BS416 Solika Spigot manondraka fantsona D50-DN150
1. Herin'ny Tensile> 150 N / mm2
2. Pressure Pressure (3.45 bar ho an'ny 15 seg.)
ASTM A888 Hubless Cast Iron Fittings
Ny fantsom-bary vy vita amin'ny hubless dia matetika ampiasaina amin'ny fantsom-pifamoivoizana amin'ny alàlan'ny rohy mora ampiasaina.Ny vokatra dia nahazo tanteraka ny fenitra, ASTM A888, CISPI301, ary manana tombony manaraka ireto: lemaka sy mahitsy, na dia rindrina fantson-doha, tanjaka avo ary fetrany, fahamaingoana ambony. ny anatiny sy ivelany ivelany ny rindrin'ny rindrina, tsy misy lesoka amin'ny hazo fika, mametraka mora, mora mitazona, maharitra ela, mahasoa amin'ny tontolo, firehitra afo ary tsy misy tabataba.
Coating: ao anatiny sy ivelan'ny kodiarana volom-borona
Sokajy: 1,5 ″, 2 ″, 3 ″, 4 ″, 5 ″, 6 ″, 8 ″, 10 ″, 12 ″, 15 ″
Manary fantsona vy sy fantsom-by vita amin'ny simika P ＜ 0.38 S ＜ 0.15 Cr ＜ 0.50 Ti ＜ 0.10 Al ＜ 0.50 Pb ＜ 0.015 C + （Si + P) / 3 CE ＞ 4.10
Fitaovana mekanika vy vy ＞ 145Mpa